उत्तर भारत Archives -::नेपाली एकता – विश्वभरिका श्रमजीवीहरुको आफ्नै आवाज
इलाहावादमा मूल प्रवाहले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
इलाहाबाद । मूल प्रवाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज इलाहाबाद नगर समितिले १३३सौं अन्तर्रास्ट्रिय श्रमिक दिवस (मई दिवस) कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सोही अवसरमा महिला नगर विभागको पनि भेला सम्पन्न गरिएको थियो । भेलाको...
प्रयागराजमा सन्देश सभा एवं महिला दिवस सम्पन्न
प्रयागराज । मूल प्रवाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज नगर समिति प्रयागराज एवं महिला विभाग को आयोजना मा अंतर्राष्ट्रिय सर्मिक महिला दिवस एवं आठौं सम्मेलन संदेश सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला विभागकी गोमा...
महिला हराएको खबर
नवलपरासी जिल्ला वर्दघाट नगरपालीका ३, कुकुरमाराबाट सिरकुमारी गुरुङ पौडेल (मायाँ) २०७८ फागुन ११ गते देखि लापत्ता भएकी छिन् । उनी श्रीमान र पाँच वर्षकी छोरीलाई ओछ्यानमा छाडेर विहान करिब ५ बजे तिरबाट लापत्ता भएकी...
कानपुरमा सन्देश सभा सम्पन्न
कानपुर, ६ मार्च । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कानपुर नगर समितिले आठौं अखिल भारत सम्मेलनको शन्देस सभा सम्पन्न पारेको छ । कार्यक्रम के. बि. गुरुङको सञ्चालन, लोकबहादुर गुरुङको अध्यक्षाताबाट अगाडि बढेको...